Meksika: voalaza fa maty ireo mpianatra tsy hita popoka tao Ayotzinapa, nipoaka ny hatezerana teny an-dalambe · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Mary Aviles Nandika (en) i Mary Aviles, Lucie Thomas Lepine, Salohy Randriafanomezantsoa
Voadika ny 20 Mey 2019 4:10 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, čeština , 日本語, Français, Español
Novonoina , nodorana tao anaty fanariam-pako ary natsipy tany anaty renirano feno fotaka tao anaty kitapo plastika mainty. Izany no zava-nanjo ireo mpianatra miisa 43, tao amin’ny sekoly fanofanana ho mpampianatra fantatra amin’ny hoe normalistas amin’ny teny Espaniola, izay nanjavona tsy hita ny 26 Septambra 2014, araka ny filazan’ny Minisitry ny Fitsarana Meksikana tamin’ny 7 Novambra 2014.
Noraisin’ny fianakavian’ireo mpianatra, sy ireo izay rehetra nandre tany Meksika sy manerantany niaraka tamin’ny ahiahy, hatezerana ary hasorenana ny fanambaran’i Jesus Murillo Karam: nifototra tamin’ny fibabohan’ireo mpamono olona miisa telo izay nokaramain’ny vondron-jiolahy mpanondrana rongony, izay tsy nahitana porofo mazava (tsy mbola fantatra ny sisa tavela tamin’ireo razana hita taorian’ny nametrahana azy ireo teo akaikin’ny toerana fandoroam-pako)
‘’Te hilaza izahay fa tsy manaiky ity fanambarana ity izahay amin’ny maha fianakavian’ireo mpianatra niharam-boina ireo, satria tsy misy porofo fa marina izany… Mila vaovao izahay. Manantena izahay mandra-piandry izany, fa mbola velona izy ireo. Hanohy hitady ireto tanora ireto izahay ary mangataka ny governemanta mba hampitombo ny fikarohana ’’ hoy ny renim-pianakaviana iray.
Nofaranan’i Murillo Karam tamin’ity fehezan-teny manaraka ity ny lahateniny nandritra ny adiny iray: ‘’Tsy mila fanontaniana intsony. Reraka amin’izany rehetra izany aho’’. Naverin’ireo izay nitsikera ny fanodikodinan’ny governemanta ity voina ity ny fanehoan-keviny niaraka tamin’ny tenirohy # YaMeCanse ( Reraka aho), izay vetivety dia lasa ‘’lamaody’’ tao amin’ny Twitter. Nahitana ny toy ny hoe ‘’ Reraka ny matahotra aho’’, ‘’Reraka ny miaina ato anatin’ny firenena mpamono olona aho’’ ary ny ‘’Reraky ny kolikoly sy ny tsimatimanota aho’’ ireo fanehoan-kevitra.
Nananosarotra ny fakana ny ADN nahafahana namantatra ny razana ny fandringanan'ny afo ireo noheverina fa sisa tavela amin'ny mpianatra. Ny niantehatra tamin’ny laboratoara manokana ao Aotrisy ny hany fanantenan'ny manampahefana farany. Mbola tsy fantatra hoe hafiriana no haharetan’ny dingana.
Jereo ny lahatsoratra : ‘Avereno ireo mpianatra Meksikana tsy hita tany Ayotzinapa’
Nandika (fr) i Lucie Thomas Lepine